Apple inoziva kuita mari | TeraNews.net
Apple inogona kuita mari
Munyori Ekaterina Yakabudiswa pa 05.02.2018
Apple vanoongorora vakashuma smartphone yekutengesa kwekota yapfuura, ichipa manejimendi maviri enhau - zvakanaka nezvakaipa. Nezve nharembozha kubva kuchirongwa chakaziviswa mumamiriyoni emamiriyoni e100, zvaive zvichikwanisa kungoziva mamirioni 77,3 mamirioni - 77% yeiyo nhamba yakatarwa. Nekudaro, mumari yemari, nekuda kwemutengo wakakwirisa weiyo mureza X, iyo brand yeAmerica yakakwanisa kuwana rekodhi mari ye88,3 mabhiriyoni emadhora.
Chaizvoizvo gore rapfuura, pakashuma kota yenguva imwe chete iyoyo, maakaunzi akashuma purofiti mu78,4 mabhiriyoni emadhora, iri $ 10 bhiriyoni isingasviki mumwaka we2017. Tichifunga kuti 70% yekutengesa ndeyekutengesa kunze kwenyika.
Asi achiri mangwanani chaizvo kuti Apple ivhure champagne, nekuti kwegore, vatengi havana kuchinja kubva pamutengo unodhura kuenda kumidziyo inodhura. Vaongorori vanoti kuwana mari kwekambani kwakapa iyo iPhone X smartphone yakakosha 999 madhora. Panyaya yehuwandu hwemidziyo inotengeswa, iyo simba iri kuderera. Macomputer emakomputa uye mafoni akawira pasi mukuda, sezvinoonekwa nehuwandu.
Kana iri mhando ye "zvimwe zvigadzirwa", zvinosanganisira mahedhifoni, ma watches, Apple TV uye zvimwe zvigadzirwa, pano, pane zvinopesana, iwe unogona kuona kuwedzera kwekutengesa ne 36% (5,5 mabhiriyoni emadhora). Nekushandisa kweApple, mhando yakakwanisawo kuwana 18% zvakanyanya kupfuura panguva yakapfuura (8,5 mabhiriyoni emadhora).
Blogger yakaiswa 3 mu1 Mhete Chiedza: kuongorora
Messenger Signal - chii icho, maficha
Xiaomi Mi 11 Ultra - IP68 kudzivirirwa kuve
Xiaomi yakwira kunzvimbo yechitatu mukutengesa mafoni
Hummer EV SUV - yemagetsi SUV prototype yakafumurwa
Huawei H6 WS8000 / 6 - maChinese akatanga kusimudzira Mesh
Chidimbu VAIO SX12 inoti inokwikwidza neMacBook
Imwe Netbook OneGx1 Pro - Pocket Mutambo Laptop
Xiaomi washer neomesa
ATV: chii icho, kuongorora, izvo zviri nani kutenga